Mbelata mmetụta ọjọọ nke COVID-19 na njem nlegharị anya ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Mbelata mmetụta ọjọọ nke COVID-19 na njem nlegharị anya ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, mere ihe ngosi na XXV Inter-American Congress of Minister and Minister of High Level of Tourism today, October 6, 2021. Emere ngosi a ka ọ bụrụ akụkụ nke nnọkọ 3: Atụmatụ iji belata mmetụta ọjọọ nke COVID-19. na Njem Nleta: Ihe mkpali na nkwado maka ụlọ ọrụ metụtara njem.
Jamaica ebula ụzọ kọwaa atụmatụ na mbọ gọọmentị iji belata mmetụta ọjọọ nke ọrịa na -eme na mpaghara ndị njem.
Gọọmentị Jamaica ewepụtala enyemaka maka obere ụlọ ọrụ, obere na obere.
Ntinye aka onye ozi ahụ n'oge a lekwasịrị anya n'ịdị mkpa ịgba ọgwụ mgbochi maka mgbake akụ na ụba ụwa na njem njem.
Egosiri ebe a bụ okwu Minista Bartlett:
Daalụ, Onye isi oche.
Ndị nnọchi anya Jamaica, na nzukọ OAS na CITUR gara aga, agwala atụmatụ na mbọ gọọmentị iji belata mmetụta ọjọọ nke ọrịa na -efe efe. mpaghara njem. Nke a esitela na usoro ihe ọhụrụ dị mkpirikpi ruo ogologo oge dị ka okporo ụzọ na -eme njem nlegharị anya iji kwado ọrụ njem maka mpaghara yana ngwugwu ihe mkpali ijeri $ 25 ijeri na akụnụba sara mbara, yana ikenye onyinye nlegharị anya iji nyere ndị ahịa aka na -arụ ọrụ na mpaghara ahụ. COVID-19 metụtara. Gọọmentị Jamaica ewepụtala enyemaka maka obere ụlọ ọrụ, obere na obere, na -achọpụta na azụmahịa ndị a bụ ọkpụkpụ azụ nke akụnụba Jamaica.
Ntinye aka m n'oge a ga -elekwasị anya na ihe ọzọ dị oke mkpa maka mgbake akụ na ụba ụwa na njem nlegharị anya-ọgwụ. Anyị na -eme ka oku pụta ìhè, na June nke afọ a, site n'aka ndị isi nke International Monetary Fund (IMF), Bank World (WB), Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) na World Trade Organisation (WTO) maka itinye ego ijeri $ 50 ijeri ọgwụ mgbochi. nkesa nke nwere ike iwepụta puku ijeri dọla itoolu na nloghachi akụ na ụba ụwa ka ọ na-erule 9. Ndị nnọchite anya m ji obi ha niile kwere na “a gaghị enwe mgbake gbasapụrụ agbasapụ na-enweghị njedebe nsogbu ahụike. Ịnweta ọgwụ mgbochi ọrịa bụ isi ihe abụọ. ”
Ọ dị nwute, na ọkwa nke ọrịa a, enweghị ike ọgwụ mgbochi na -adịgide ebe ọbụlagodi kesara ihe karịrị ijeri ọgwụ mgbochi 6, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nọ na mba ndị nwere nnukwu ego ebe mba ndị dara ogbenye nwere ihe na -erughị 1% nke ndị bi na ya. Anyị kwenyere na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru ụwa ọnụ abụghị naanị ihe dị mkpa kamakwa ọ na -enye echiche akụ na ụba ogologo oge. N'iburu njirimara nke ọrịa na-efe efe, yana COVID-19, ọkachasị, enweghị ike ịnwe njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-adigide ma ọ bụ ebe a na-ahapụ mba ndị na-akpata obere ego. Nke a bụ ebumnuche nke 2030 Agenda for Sustainable Development - ka anyị ghara ichefu. N'akụkụ a, anyị na -anabata ma na -enwe ekele maka onyinye ịgba ọgwụ mgbochi sitere n'aka ndị mmekọ ibe anyị mepere emepe na anyị ga -ekwusi ike na ndị a kwesịrị ịbụ onyinye n'oge na arụmọrụ, na -echebara ụbọchị ọgwụgwụ ga -agwụ.
Dabere na UN World Tourism Organisation (UNWTO) na mbido izu a, mmụba nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru ụwa ọnụ bụ otu ihe na -egosi nlọghachi azụ nke ndị njem mba ụwa na -enwe na June na Julaị 2021. Mbipụta ọhụrụ nke UNWTO World Tourism Barometer na -egosi na ihe ruru 54 nde ndị njem nleta gafere ókèala mba ụwa na July 2021, gbadata 67% site na July 2019, mana ọ ka bụ nsonaazụ siri ike kemgbe Eprel 2020.
Ndị nnọchi anya m nwere obi ụtọ ịhụ na mpaghara America anyị nwere ntakịrị mbelata nke ndị mbata njem mba ofesi 68% karịa mpaghara ndị ọzọ, ebe Caribbean na -egosi arụmọrụ kacha mma n'etiti mpaghara ụwa. Nke a bụ ozi na -agba ume ime ka ụzọ anyị dị n'ihu maka mgbake gara n'ihu. Dika Director General Ikonyo-Iweala nke World Trade Organisation kwuru, "enwere ike nweta mgbake akụ na ụba na azụmaahịa naanị site na amụma na-ahụ maka ịnweta ọgwụ mgbochi ngwa ngwa n'ụwa."
Ndi otu WHO ekwuputala isi ihe dị mkpa iji nweta 40% ịgba ọgwụ mgbochi ụwa site na Disemba 2021 na 70% site na June 2022 iji kwụsị ọrịa a. Anyị nwere ngwaọrụ dị mkpa, anya anyị ga -adịkwa na ihe nrite maka nlanarị na ihe ịga nke ọma nke ọgbọ a na n'ọdịniihu.
Ka anyị na -eche nkesa na -enweghị oke na ọgwụ mgbochi n'etiti mba ndị mepere emepe na mba ndị na -akpata obere ego nke Global South, anyị na -eche ihe ịma aka ọzọ nke ịla azụ ọgwụ mgbochi n'etiti ụfọdụ ụmụ amaala anyị. Ndị mmadụ na -atụkarị egwu mmiri a na -amachaghị ama, ọkachasị n'ihe gbasara ahụike ha, ozi na -ezighi ezi na -eme ka egwu a dị.
Na Jamaica, ebe ọnụ ọgụgụ ndị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde atọ, anyị ebutela ọgwụ 3, yana naanị 787,602% nke ndị bi na -edepụtara dị ka ọgwụ mgbochi. Gọọmentị etinyela ozi okike iji gwa ụmụ amaala ma gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa. Ejikọla mmekọrịta nke ọha na nke onwe ya na nkwekọrịta edebanyere ụlọ ọrụ iji nyere aka na draịva ịgba ọgwụ mgbochi na mpaghara a na-erekarị ahịa dị ka nnukwu ụlọ ahịa na ebe ịzụ ahịa iji mee ka ohere ịnweta ọgwụ mgbochi dị mfe. Anyị na -echeta ndị kacha dịrị nfe n'etiti anyị yana na nke a, etinyere ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi mkpanaka maka iru n'ime ime obodo yana ezinụlọ ndị dara ogbenye, ndị agadi na ndị nwere nkwarụ nwere ike ha agaghị enwe ike ịga njem dị mfe maka ịgba ọgwụ mgbochi.
Karịsịa na ụlọ ọrụ njem, emepụtara Taskforce Vaccination Taskforce dị ka ngosipụta ọzọ nke mmekorita n'etiti ngalaba ọha (Ministry of Tourism) na nkeonwe (Nkeonwe Vaccine Initiative na Jamaica Hotel na Ndị Njem Nleta) iji kwado COVID-19 afọ ofufo. ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị ọrụ nlegharị anya 170,000 niile. Nke a bụ nnukwu ebumnuche; agbanyeghị, anyị ka na -atụghị ụjọ dịka n'ime ụbọchị atọ mbụ nke mmemme a, a gbatara ndị ọrụ 2000 ọgwụ mgbochi.
Ndị nnọchi anya m na -echeta ọrụ “ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -efe efe” nke nwere ike igbochi mbọ mgbake anyị. N'akụkụ a, nhazi na imekọ ihe ọnụ mba ụwa bụ isi ihe iji hụ na amatala ọgwụ mgbochi dị mma ma dị irè ka ọ ghara ịkpa oke na -enweghị isi maka ịgba ọgwụ mgbochi na njem. Ọ ga -amasị m ikwughachi isi okwu na ịkpa oke. Ọrịa ọjọọ a emeela ka ọ pụta ìhè ma ka njọ nke enweghị ike dị n'ime na n'etiti mba. Iwu na mmemme anyị kwesịrị ịchekwa maka ichekwa ndụ na ibi ndụ maka ịdị mma ndụ na mmepe na -adigide.
Njem nlegharị anya dị ka azụmaahịa na ọrụ dị oke mkpa maka mba ndị dị na Caribbean na America maka ntinye aka na ọrụ, GDP na ọgbọ mgbanwe mba ọzọ. Dị ka mpaghara na-arụsi ọrụ ike na ndị mmadụ na-eme ngwa ngwa, uru na ọghọm anyị na-egosipụtakwa ngwa ngwa n'ọmụmụ ọnụ ọchị na ndị ọrụ anyị na ndị njem nleta anyị. Ọ bụrụ na anyị ebute ndị mmadụ ụzọ, anyị nwere ike ịchọta ụzọ mana naanị na mmekorita na imekọ ihe na ọkwa niile.
Gọọmentị Jamaica na -ekwughachi nkwa ya na ụkpụrụ nke multilateralism na Organization of American States (OAS) na ndị otu mba ụwa ndị ọzọ. Ọ dịghị mgbe anyị ga -enweta amụma ịgba ọgwụ mgbochi n'enweghị nkwado. Anyị agaghị ahụ mgbake dị mma ma ọ bụrụ na enweghị nkwado. A na m akpọku mba niile nọchitere anya taa ka ha leba anya n'ihe ndị bụ eziokwu na otu kacha mma anyị nwere ike isi rụkọọ ọrụ ọnụ iji pụta ike ma nwekwa ume.